Ballone Star - Slunečnice.cz
Slunečnice.cz » Sport » Ballone Star 2.0.1
Ballone Star 2.0.1
"Ballone Star" Sports Mobile Application (Myanmar)
"Ballone Star @ ဘောလုံးစတား" သည် နေ့စဉ်နှင့်အမျှ ဘောလုံး အားကစားသတင်းများ၊ ပိုမိုမြန်ဆန် တိကျသော သတင်းများကို မိုလ်ဘိုင်းဖုန်းဖြင့် ဖတ်ရှုနိုင်မည့် Mobile Application တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ Ballone Star တွင် ကမ္ဘာတစ်လွှား လူကြိုက်များ နှစ်ခြိုက် ကြသည့် လိဂ် ပြိုင်ပွဲကြီးများ၏ သတင်းများ၊ ပုံရိပ်များကို မြန်မာစာဖြင့် အပြည့်စုံဆုံး၊ အတိကျဆုံး၊ အမြန်ဆန်ဆုံး ဖတ်ရှုရမည် ဖြစ်ပါသည်။ Mobile phone အသုံးပြုကြသော မြန်မာပြည်သူ ပြည်သားများအနေဖြင့် မိမိတို့ ရောက်လေရာတွင် မိမိတို့ နှစ်သက်သော ဘောလုံး အကြောင်း သတင်းများကို အလွယ်တကူ သိရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်။ Ballone Star တွင် ပွဲစဉ် ဇယားများ၊ ပွဲစဉ် ရလဒ်များ၊ ပွဲပြီး သတင်းများ၊ ပွဲပြီး သုံးသပ်ချက်များ၊ ပွဲကြို ခန့်မှန်းချက်များ၊ ပြိုင်ပွဲ တစ်ခု၏ အကောင်းဆုံးအမှန်ဆုံး ၃ပွဲ ခန့်မှန်းချက်များ၊ အသင်းတိုင်း ၏ ခန့်မှန်းကစားကွက်၊ လူစာရင်းများ၊ ဒဏ်ရာရ၊ ပွဲပယ် ခံရသူများအကြောင်း၊ စသည်တို့ကို စုံလင် ပြည့်စုံစွာ ထည့်သွင်း ဖော်ပြပေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
ယခုချိန်ခါသည် မြန်မာ လူမျိုးများ ကြိုက်နှစ်သက်ဆုံး ပြိုင်ပွဲကြီးများ ထဲမှ တစ်ခု ဖြစ်သော UEFA Euro 2016 သတင်းများ၊ ပွဲစဉ်များ၊ ရပ်တည်မှု ဇယား၊ အသင်းများ အကြောင်းကိုလည်း "Ballone Star" Sports Mobile Application တွင် စုံစုံလင်လင် နှင့် အချိန်နှင့် တပြေညီ ဖတ်ရှုနိုင်မှာ ဖြစ်သောကြောင့် အခုပဲ "Ballone Star" Sports Mobile Application ကို Play Store မှ Download ရယူလိုက်ပါ ဘောလုံးပရိသတ်ကြီးရေ .....
"Ballone Star" Sports Mobile Application (English)
The Ballone Star @ Football Star is the mobile football app in Myanmar. Ballone Star is the best Football App to stay up to date with all the latest football news, live scores, results, transfers and more from your favourite team and all other clubs around the world.
Get the best football or soccer experience:
• Fixtures, live scores, statistics and results on every game, team or player
• Customizable push notifications for unlimited teams and matches
• Over 100 football news articles published every day
• Videos including press conferences, interviews and highlights
• Squad info, formations, player pictures and top scorers
We are working for the football social fan and provide you with the best football experience. If you have any feature requests or feedback please let us know!